Matayos 6: Wacdiyadii Buurta ahayd, Kaniisadda Adduunka ee Switzerland Switzerland (WKG)
Ciise wuxuu ina baray heerka sare ee xaqnimada kaas oo u baahan dabeecad gudaha ah oo daacadnimo inaga ahaata. Erayada naxdinta leh, wuxuu nooga digayaa xanaaq, sino, dhaar iyo aargudasho. Wuxuu yiri waa inaan xitaa jeclaano cadawgeena (Matayos 5). Farrisiintu waxay caan ku ahaayeen tilmaamaha adag, laakiin cadaaladdeenu waa inay ka fiicnaataa tan Farrisiinta (taas oo ah wax aad looga xumaado haddii aan illaawin wixii wacdinta buurta dusheeda hore loogu ballanqaaday naxariis). Caddaaladdu waa run qalbiga. Cutubka lixaad ee Injiilka Mataanaha ah waxaan ku aragnaa sida Ciise mowduucan uga dhigayo mid cad isagoo cambaareynaya diin ahaan show.
Samofal qarsoodi ah
«Ka taxadar cibaadadaada inaadan ku dhaqmin dadka hortooda inay arkaan; haddii kale mushahar kuma lihidin Aabbihiinna jannada ku jira. Haddaad sadaqad bixinayso, ha u oggolaan inuu hortaada ku afuufo sida munaafiqiintu wax uga dhex galaan sunagogyada iyo jidadka, si dadku u ammaanaan. Runtii waxaan idinku leeyahay, Iyagu mar hore bay heleen mushaharkoodii » (Aayadaha 1aad).
Wakhtigii Ciise dadku waxa jiray dad bandhig sameeya diinta. Waxay hubiyaan in dadku arki karaan shaqadooda wanaagsan. Sidaa darteed waxay ka heleen aqoonsi dhinacyo badan. Taasi waa waxa ay helayaan oo dhan, ayuu yidhi Ciise, waayo ficilladoodu waa ficil uun. Iyagu ma danaynaynin inay Ilaah u adeegaan, laakiinse waxay ku fiicnaayeen aragtida dadka; dabeecad aan Ilaah abaalmarin doonin. Akhlaaqda diinta waxaa sidoo kale lagu arki karaa maanta buugaagta, laylisyada xafiiska, sameynta barashada Kitaabka Quduuska ah ama tabarucaad wargeysyada kaniisadda. Waxaad cunto siin kartaa masaakiinta oo aad injiilka ku wacdiyi karto. Dibedda waxay u egtahay adeeg culus, laakiin aragtida ayaa aad u kala duwanaan karta. Laakiin markaad sadaqad bixinayso, bidixdaadu yaanay ogaan waxa midigtaadu samaynayso, si ay sadaqaddaadu u qarsoonaan; oo aabbahaana wuxuu arkaa waxa qarsoon ayaa kuu abaal marin doona » (Aayadaha 3aad).
Dabcan, "gacanteenna" waxba kama oga falalkayaga. Ciise wuxuu adeegsanayaa weedh muujinaya in sadaqadu tahay ujeedo ma aha, mana aha faa'iido dadka kale ama isku amaan. Waxaan u sameyneynaa Eebbe, oo aan ugu wacanayn sumcaddayada darteed. Maaha macno ahaan in la fahmo in sadaqada kaliya ay dhici karto si qarsoodi ah. Ciise wuxuu yiri kahor camalkeenna wanaagsan waa in la muujiyaa si dadku u ammaanaan Ilaah (Matayos 5,16). Ahmiyada la saarayo ayaa ah dhaqankeena, ma ahan saameynta dibadeena. Ujeeddadeennu waa inaynu camal wanaagsan u qabanaa ammaanta Ilaah ee ma aha sharafteenna.
Ciise wuxuu yiri wax la mid ah salaadda: «Markaad tukanaysid, yaadan noqonin sida Munaafiqiinta oo jecel inay istaagaan oo ku tukadaan sunagogyada iyo geesaha wadooyinka si dadka loo arko. Runtii waxaan idinku leeyahay, Horay bay u heleen mushaharkoodii. Laakiin adigu goortaad tukanaysid, qolkaaga qarsoon gal, oo albaabka xidho, oo u ducee aabbahaa qarsoon; oo aabbahaana wuxuu arkaa waxa qarsoon ayaa kuu abaal marin doona » (Aayadaha 5aad). Ciise amar cusub ma uusan ka dhigin salaadda dadweynaha. Mararka qaar xitaa Ciise wuxuu ku tukaday meel fagaare ah. Muhiimadu waxay tahay inaanan ku tukanaynin waa inaan aragno, mana aha inaan ka fogaano salaadda iyadoo laga baqanayo aragtida dadweynaha. Tukashadu waxay caabudaysaa Ilaah oo uma joogi kartid inaad naftaada si fiican u soo bandhigto.
Oo goortaad tukanaysid, ha noqonina sida dadka aan Yuhuudda ahayn markay ugu hadlayaan. maxaa yeelay waxay moodayaan in la maqli doono haddii ay yiraahdaan ereyo badan. Taasi waa sababta ay tahay inaadan noqon iyaga oo kale. Sababta oo ah aabahaagu wuu ogyahay waxaad u baahan tahay ka hor intaadan weydiin » (Aayadaha 7aad). Ilaah wuu ogyahay baahiyaheenna, laakiin waa inaan weli isaga weydiisanno (Filiboy 4,6) kuna adkayso (Luukos 18,1-8). Guusha salaadu waxay kuxirantahay Ilaah, ee nama saarna. Maaha inaanu gaarno tiro cayiman oo ereyo ah ama aan ilaalinno waqti cayiman, kumana qasban nahay inaanu qaadanno dabeecad duco gaar ah, mana doorano ereyo qurux badan. Ciise wuxuu ina siiyay tusaale duco ah - tusaale fudud. Waxay noqon kartaa hage ahaan. Naqshadayaasha kale waa la soo dhaweynayaa.
Sidaa darteed waa inaad sidan u duceysaa: Aabbahayaga jannada ku jira! Magacaaga waa la quduusnaan doonaa. Boqortooyadaadu ha timaado. Doonistaada dhulka ha lagu yeelo sida jannada loogu yeelo » (Aayadaha 9aad). Tukashadani waxay ku bilaabmaysaa ammaanta fudud - majiro wax murugsan, kaliya waa sameynta rabitaanka in Ilaah la sharfo iyo in dadku aqbalaan doonistiisa. «Sii maanta kibisteenna maalinlaha ah» (V. 11). Waxaan taas ku qiraynaa inay nolosheenu ku tiirsan tahay Aabaheenna Qaadirka ah. In kasta oo aan u tagi karno dukaanno si aan u iibsanno rootiga iyo waxyaabo kale, waa inaan xasuusnaano in Ilaahay yahay kan oo tan su'aal ka dhigaya. Waxaan ku kalsoonahay isaga maalin kasta. Oo naga cafi gafkayaga sidaannu u cafinnay kuwii noo qummanaa. Oo jirrabaadda ha noo jirrabayn, laakiin sharka naga samatabbixi » (Aayadaha 12aad). Waxaan u baahanahay cunno oo keliya, laakiin sidoo kale xiriir aan la leenahay Ilaah - xiriir aan inta badan dayacno iyo sababta aan inta badan ugu baahan nahay cafis. Ducadani waxay sidoo kale ina xusuusineysaa markii aan weydiisano Eebbe inuu noo roonaado, inaan u naxariisno kuwa kale. Dhammaanteen innagu ma nihin koox-diimeed - waxaan u baahan nahay caawimaad rabaani ah si aan uga hor tagno jirrabaadda.
Halkan Ciise wuxuu ku soo gabagabeynayaa ducada oo ugu dambayntiina wuxuu ku tusayaa masuuliyadeena in aan is cafinno Markii aan si wanaagsan u fahanno sida uu Ilaah u wanaagsan yahay iyo sida ay u weyn tahay khaladaadkeenna, ayaa sifiican aan u fahmi doonnaa inaan u baahan nahay naxariis iyo inaan diyaar u nahay inaan cafinno dadka kale (Aayadaha 14aad). Waxay u egtahay digtoonaan: "Waxaan kaliya sameyn doonaa tan markaad sidaas sameysay". Dhibaatada weyn ayaa ah in dadku aysan aad ugu fiicnayn is cafinta. Midkeenna kaamil ma ahan, qofnana gebi ahaanba ma cafin karo. Ciise miyuu naga codsanayaa inaan sameyno wax xitaa Ilaah uusan sameyn doonin? Miyay macquul noqon lahayd inaan shuruud la'aan ku cafino dadka kale adoo ka dhigeyna cafis mid shuruud ku xiran? Hadduu Eebbe idligiisa saamaxay waxay kuxirantahay cafiskeena oo waxaan sameynay isku mid, markaa waxaan cafi karnaa dadka kale markay cafiyeen. Waxaan geli doonnaa saf aan dhammaad lahayn oo aan dhaqaaqaynin. Haddii cafiskeenu ku saleysan yahay cafinta dadka kale, badbaadadeenna waxay kuxirantahay waxaan ku qabanno - howlaheena. Tani waa sababta aan u leenahay dhibaato xagga cilmiga ahaaneed iyo ficil ahaaneed markii aan u qaadanno Matayos 6,14: 15 macno ahaan. Halkaa markay marayso, waxaan ku dari karnaa in Ciise u dhintay dembiyadeenna kahor intaanannaan xitaa dhalan. Qorniinku wuxuu leeyahay inuu iskutallaabta ku qodbay iskutallaabta oo uu dunida oo dhan wada la heshiiyey.
Dhanka kale, Matayos 6 wuxuu ina barayaa in cafiskeenu u muuqdo mid shuruudaysan. Dhanka kale, Qorniinku wuxuu na barayaa in dembiyadeenna mar hore la cafiyey - taas oo ay ku jirto dembidhaafkii la cafiyey. Sidee labadan fikradood loo heshiisiin karaa? Ama waxaan si qalad ah u fahmin aayadaha hal dhinac ama kuwa dhinaca kale ah. Sida dood dheeraad ah, waxaan hadda ka fiirsan karnaa in Ciise uu had iyo goor u adeegsado aasaaskiisa buunbuuninta wada sheekaysigiisa. Haddii ishaadu ku xumayso, iska bixi. Markaad tukanaysid, tag meesha kuugu dhow (laakiin Ciise had iyo goor kuma uusan tukanin guriga). Markaad wax siiso kuwa baahan, gacantaada bidix ha ogeyn waxa gacantaada midig ay sameyneyso. Ha ka xanaaqin qof shar leh (laakiin Bawlos wuu sameeyey). Waxay dhahdaa maya ama maya (laakiin Bawlos wuu sameeyey). Waa inaadan qofna ugu yeedhin aabbe - laakiin innaguna, annagu innagu waynu naqaan.
Tan waxaan ka arki karnaa in tusaale kale oo buunbuun lagu isticmaalay Matayos 6,14: 15. Taasi micnaheedu maahan inaan iska indho tiri karno taas - Ciise wuxuu isku dayayay inuu tilmaamo muhiimadda cafiska dadka kale. Haddii aan rabno in Eebbe na dhaafo, ka dib waa inaan cafinaa dadka kale. Haddii aan rabno inaan ku noolaano boqortooyo la cafiyey, waa inaan isla sidii ugu noolaano. Maaddaama aan rabno in Ilaah jeclaado, waa inaan jeclaano dadka kale ee aadanaha ah. Haddii aan sidaa yeelno, taas uma beddeli doonto dabeecadda Eebbe inuu jacayl noqdo. Waa run haddii aan rabno in la na jeclaado, waa inaan. In kasta oo ay u egtahay dhammaan waxaas oo dhan waxay kuxirantahay fulinta shuruudo shuruud ku xidhan, ujeedada waxa la yidhi ayaa ah inaanu dhiirigelino inaan jeclaano oo cafino. Bawlos wuxuu u dhigay sida tilmaamaha: "Midkiinba midka kale ha u dulqaato oo ha cafiyo haddii mid ka cabanayo mid kale; Sidii Rabbigu idiin cafiyey, idinkuna waad cafiyaan. (Kolosay 3,13). Tusaale ayaa halkan laguugu sheegayaa; shuruud ma ahan.
Baryada Rabbi waxaan weydiisanaa rootiga maalinlaha ah, in kastoo aan ku weydiisanno (Xaaladaha badankood) horeba guriga ayey ugu jireen. Sidaas oo kale ayaan cafis weydiisaneynaa, in kastoo aan mar hore helnay. Waa ogolaansho in aan khalad sameynay taasina ay saameyn ku leedahay xiriirkeena aan la leenahay Ilaah, laakiin kalsooni ku qabo inuu diyaar u yahay inuu cafiyo. Waa qayb ka mid ah waxa loola jeedo in la helo badbaado sidii hadiyad halkii ay ahayd wax aan ku kasban karno waxqabadkeenna.
Soonka sirta ah
Ciise wuxuu la yimid dhaqan kale oo diineed: «Haddaad soonto, ha u muuqan xanaaq sida munaafiqiinta; maxaa yeelay waxay wejigooda u dhaqaajinayaan si ay isu muujiyaan dadka hortooda iyagoo sooman. Runtii waxaan idinku leeyahay, Horay bay u heleen mushaharkoodii. Laakiin haddaad soontid, madaxaaga saliid marso oo wejigaaga dhaq, oo dadka xaggeeda ha u muuqan inaad soontid, laakiin waxaad tahay aabbahaagii qarsoonaa, oo aabbahaana wuxuu arkaa waxa qarsoon ayaa kuu abaal marin doona » (Aayadaha 16aad). Markii aan soonno, waanu maydhannaa oo u shanleynaa sidii caadiga ahayd, maxaa yeelay waxaan ku hor nimid Ilaah oo ma nihin dadka. Mar labaad xoogga ayaa la saaraa aragtida; su’aal kama taagna soonka. Haddii qof na weyddiisto haddii aannu sooman nahay, si run ah ayaan uga jawaabi karnaa - laakiin waa inaanu waligood rajeyn in la i weyddiiyo. Hadafkeenu maahan inaan soo jiidno dareenka, laakiin inaan raadino ku dhowaad Ilaah.
Ciise wuxuu tilmaamayaa isla hal dhibic dhammaan saddexda mawduuc. Haddii aan sadaqo bixinno, tukano ama soonno, waxaa lagu sameeyaa "qarsoodi". Annagu ma doonayno inaan dadka dhiirrigelinno ama kama qarsoona. Waxaan u adeegnaa Ilaah oo keliya Isagaa sharaf leh. Wuu na abaal marin doonaa. Abaalmarintu sidoo kale waa loo qaban karaa sidoo kale si qarsoodi ah. Waa run oo waxay u dhacdaa si waafaqsan wanaaggiisa rabbaaniga ah.
Khasnadaha jannada ku jira
Aynu xooga saarno raali ahaanshaha Eebbe. Aynu yeelno doonistiisa oo aan qiimeyno abaalmarinnadiisa in ka badan abaalmarinta ku-meel-gaarka ah ee adduunka. Amaanta guud waa qaab abaal marin muddo gaaban ah. Ciise wuxuu halkan kaga hadlayaa kartida waxyaalaha jirka. Waa inaadan ku uruurin dhulka meesha ay ku cunaan aboor iyo miridhku iyo meesha tuugadu ku jabaan oo xadaan. Laakiin maal jannada ku urursada, meesha aboorka iyo miridhku cunaan oo ay tuugaggu jebiyaan oo ka xadaan » (Aayadaha 19aad). Hantida adduunku waa cimri gaaban. Ciise wuxuu nagu waaniyey inaan raacno istiraatiijiyad maalgashi oo wanaagsan - inaan raadino qiimayaasha weligiis ah ee Eebbe hayno sadaqada aamusnaanta, salaadda aan la ilaalin karin iyo soonka sirta ah.
Haddii aan Ciise aad ula qaadanno macno ahaan, qof ayaa u malayn kara inuu u jeedin lahaa dalab ka dhan ah badbaadinta da'da hawlgabka. Laakiin dhab ahaantii waxay ku saabsan tahay qalbigayaga - taas oo aan tixgelinno inay qiimo leedahay. Waa inaan qiimeynaa abaalmarinta jannada in ka badan kaydkeenna adduun. «Sababtoo ah halka uu jacaylkaagu yahay, wadnahaagu sidoo kale wuu jiraa» (V. 21). Haddii aan u maleyneyno in waxyaabaha Ilaah qiimeeyo ay yihiin kuwo qiimo leh, qalbiyadeenna ayaa si sax ah u hagi doona dhaqankeenna.
«Isha waa iftiinka jirka. Haddii ishaadu ay cod dheer tahay, jidhkaaga oo dhammi waa iftiin doonaa. Laakiin ishaadu hadday xun tahay, jidhkaaga oo dhammi gudcur buu ahaan doonaa. Haddii iftiinka kugu jira uu gudcur yahay, gudcurkaasu sidee buu u weyn yahay! (Aayadaha 22aad). Sida muuqata, Ciise wuxuu adeegsanayaa odhaahdiisa waqtigiisa halkan wuxuuna ku dabaqi karaa hunguri lacag. Haddii aan eegno waxyaabo si sax ah u leh, waxaan arki doonnaa dariiqooyin wanaag loo sameeyo oo deeqsinimo leh. Si kastaba ha noqotee, markii aan nafteena nahay oo aan masayr nahay, waxaan galaynaa mugdi xagga akhlaaqda ah - oo ay kharribtay waxyaabaha maandooriyaheenna ah. Maxaan dooneynaa nolosheena - inaan qaadno ama siinno? Xisaabaadkayaga bangiyada ma loo sameeyay inay na adeegaan, mise waxay noo oggolaadaan inaan u adeegno kuwa kale? Himiladeena ayaa nagu hagaya wanaagga ama musuqmaasuq. Haddii gudahayagu musuqmaasuq yahay, haddaan uun raadino abaalmarinta adduun, markaa annagu runtii musuqmaasuq baan nahay. Maxaa na dhiirrigeliya? Ma lacagtu mise Ilaahay baa? Ma jiro qof u adeegaya laba sayid, oo mid buu nacayaa kan kalena wuu jeclaanayaa, ama mid buu ku dhegi doonaa, kan kalena wuu quudhsanayaa. Uma adeegi kartaan Ilaah iyo maalmo » (V. 24). Uma adeegi karno Ilaah iyo aragtida dadweynaha isku waqti. Waa inaan u adeegno Ilaah kaligiis oo aan tartan jirin.
Sidee qofku "ugu adeegi karaa" mammo? Aaminaadda ah inay lacagtu u horseedayso nasiibkeeda, inay ka dhigayso inay umuuqato mid aad u xoog badan oo ay ku dhejin karto qiimo aad u weyn. Qiimayntan ayaa sifiican ugu habboon Ilaah. Isaga waa kan ina siiya farxad, waa isha dhabta ah ee amniga iyo nolosha; Isagu waa xoogga sida ugu wanaagsan noo caawin kara. Waa inaan qiimeynaa oo xushmeyno isaga waxkastoo kale maxaa yeelay isagu waa kan koowaad.
Amniga dhabta ah
Sidaa darteed waxaan idinku leeyahay: Ha ka welwelina ... waxaad cuni doontid iyo waxaad cabbi doontaan; ... waxaad xiran doontaa. Dadka aan Yuhuudda ahayn waxay u dadaalayaan waxaas oo dhan. Sababta oo ah Aabbihiinna jannada ku jiraa wuu ogyahay inaad waxaas oo dhan u baahan tahay » (Aayadaha 25aad). Ilaah waa aabbe wanaagsan oo isaguna wuu ina xannaanayn doonaa markii uu ku noolaado meesha ugu sarreeya nolosheena. Ma aha inaan ka walaacno fikradaha dadka ama ka walwaleyno lacag ama alaab. "Haddaad doonaysid boqortooyada Ilaah iyo xaqnimadiisa horta, kulligood way kugu dhici doonaan" (V.33) Waxaan ku noolaan doonnaa cimri dheeri, helidoonaan cunno ku filan, helno saad ku filan haddii aan Ilaah jeclaanno
Matthew 6: Mawduuca On Mount (3)